SUNY I-SUNY Photo Tour Tour
Uhambo lwe-Photo of SUNY Potsdam
SUNY Potsdam - I-Satterlee Hall
SUNY Potsdam - I-Satterlee Hall. Ifoto nguLaura Reyome
Ngombhoshongo walo okhupha phezulu kwinqanaba eliphakathi kwe-SUNY Potsdam campus, iSatterlee Hall yenye yezakhiwo zezithonjana ze sikolo. Egqitywa ngowe-1954, isakhiwo sabizwa ngokuba nguDkt. O. Ward Satterlee, uMlawuli oyiNtloko wezeMfundo uSUNY Potsdam.
Isakhiwo sinezindlu ezininzi zeSebe leMfundo le-SUNY Potsdam kunye neeofisi zeMbali, uLwazi lokuFunda nokuBhala, ezoPolitiko, i-Sociology kunye neTheater kunye neMdaniso. Ezinye zeenkqubo eziqineleyo zePotsdam kwaye zithandwa kakhulu kwimfundo.
USUNY Potsdam ungomnye weeKholeji zeYunivesithi kwiYunivesithi kaRhulumente yaseNew York. Ukuze ufunde kabanzi malunga nesikolo, iindleko zalo, uncedo lwezemali, kunye nemigangatho yokwamkelwa, tyelela iphrofayili yeSUNY Potsdam kunye newebhusayithi esemthethweni yeSUNY Potsdam.
SUNY Potsdam - I-Crane Music Centre
ISUNYANE Yesikolo seMidlalo yeCancer yasePotsdam. Ifoto nguLaura Reyome
Kugqitywe ngowe-1973, iSikole soMculo se-Crane sakhiwe ngezakhiwo ezine ezakha indlu yeSunane ye-Music ye-Crane School of Music. Iziko liquka ihholo lekhonsathi, indawo yokuzonwabisa yomculo, ilayibrari, amagumbi okufundela kunye nama-studios amaninzi kunye neelabhu. Umculo kunye nezobugcisa ziphambili kwesazisi sika-SUNY Potsdam, kwaye iMfundo yeMculo yenye yezona zinto ziqinileyo kunye nezithandwa kakhulu ezinikezelwa kwiyunivesithi.
IMinerva Plaza kwiSUNY Postdam
I-Minerva Plaza kwi-SUNY Postdam - iSitembu seMinerva. Ifoto nguLaura Reyome
Emi phakathi kweentyantyambo, iinqwelwe kunye neebhentshi, umfanekiso ka-SUNY Potsdam weMinerva awuyinto ekhethekileyo yomzobo. Iikholeji ezininzi zokuqeqesha ootitshala baseNew York zasebenzisa unkulunkulukazi wobulumko nokukhusela njengomqondiso ofanelekileyo wemfundo yabafundisi abatsha. Kulo mfa nekiso, iMinerva inokubonwa ngeLibrari yeTrama ngasemva.
I-Crumb Memorial Library e-SUNY Potsdam
I-Crumb Memorial Library e-SUNY Potsdam. Ifoto nguLaura Reyome
I-Library yeCumbumb Memorial e- SUNY Potsdam inendawo ebonakalayo phakathi kwinqanaba le-school academic quad. ILayibrari yeCraw yileyibrari ephambili yePotsdam, kwaye iqokelela iikholeji ezixhasa zonke iiprogram zeCachelor of Arts. Nawuphi na umsebenzi ongenakufunyanwa kwiilayibhrari zeCraw okanye zeCrane zingacelwa ngohlelo lwe-SNY Potsdam. Abafundi baya kufumana izixhobo zokusebenza zeekhompyutheni, ukufikelela kwi-wireless kunye nokuprinta kwi-Library ye-Crumb.
IHolo leMerritt e-SUNY Potsdam
IHolo leMerritt e-SUNY Potsdam. Ifoto nguLaura Reyome
IHolo leMerritt yenye yezakhiwo ezininzi eziphethwe yi-SUNY Potsdam. Isikolo siyaqhenyiswa kwi-ivy yayo, kwaye enye yevidiyo ezithunyelwayo kwi-intanethi ifanisa izakhiwo zayo kwii-Chia Izilwanyana ezikhula ngelixa abafundi bekhula.
I-Merritt Hall inekhaya kwiiofisi ezininzi kunye nedama lokubhukuda kunye ne-gymnasium. Ezinye izakhiwo zezemidlalo ziseMaxcy Hall. Kwiimidlalo, iPotsdam Ikhuphisana kwiNkomfa ye-NCAA Division III INKQUBO yeNtlalo (SUNYAC) kunye ne-Eastern College Athletic Conference (ECAC).
USara M. Snell Music Theater eSUNY Potsdam
USara M. Snell Music Theater. Ifoto nguLaura Reyome
Umculo kunye nobugcisa obuqhubayo bubunamandla obukhulu be-SUNY Potsdam, kwaye iSara M. Snell Music Theatre yenye yeendawo zokusebenzela eziphambili zeyunivesiti. I-Snell Theatre yenye yezakhiwo ezine ezenza i-Crane Music Centre. Izihlalo zendawo yokuzonwabisa 452. Iindawo ezinkulu zeHolmer Concert Hall 1290.
Isikolo se-Crane School of Music sinabantu abasondele kwi-600 yabafundi besikolo esiphantsi kunye nootitshala abangama-70 kunye nabasebenzi beengcali. Unokufunda ngakumbi kwiwebhusayithi yeSUNY Potsdam.
I-Outdoor Classroom e-SUNY Potsdam
I-Outdoor Classroom e-SUNY Potsdam. Ifoto nguLaura Reyome
Xa isimo sezulu sifudumala kwi-SUNY Potsdam, ngamanye amaxesha abafundisi baya kuthatha iiklasi zabo ngaphandle. Naliphi na indawo engcolileyo inokuyenza, kodwa iyunivesiti ikhile ezinye izithuba zokufundela zangaphandle (njengalowo uboniswe apha) ngokukodwa ngenjongo.
I-Walkway ngokusebenzisa i-Quad enkulu eSUNY Potsdam
I-Walkway ngokusebenzisa i-Quad enkulu eSUNY Potsdam. Ifoto nguLaura Reyome
I-campus yase-Potsdam yineendawo ezininzi eziluhlaza kunye namagumbi okufundela ngaphandle. Lo mfanekiso ubonisa indlela ehamba ngayo kwi-quad ephakamileyo. Xa iiklasi ziseshoni, le ndlela ihamba kunye nabafundi.
IHollywood Concert Hall e-SUNY Potsdam
IHollywood Concert Hall e-SUNY Potsdam. Ifoto nguLaura Reyome
Isikhundla esikhulu kunazo zonke kwiSUNY Potsdam nguHelen M. Hosmer Concert Hall kunye nezihlalo zayo eziyi-1,290. I-Potsdam inomnye wemimandla enamandla kakhulu kunye neenkqubo zemfundo ezweni, kunye neHormer Concert Hall yenye yezakhiwo ezine eziphambili ezenza i-Crane Music Centre.
URaymond Hall kwiSUNY Potsdam
URaymond Hall USUNY Potsdam. Ifoto nguLaura Reyome
URaymond Hall iyisakhiwo esibalulekileyo kunomntu onomdla wokuya eSUNY Potsdam kuba likhaya kwi-Admissions Office. Abafundi abanomdla baya kuqalisa ukutyelela kwi-campus kule sakhiwo esiyi-8.
Ukuze ufunde ngemigangatho yokwamkelwa kwe-SUNY Potsdam, khangela le phrofayili yokuvakalisa iPotsdam okanye uvakashele iwebhusayithi ye-admissions yunivesithi.
Dhaulagiri: iNtaba ye-7 ephakamileyo kunazo zonke kwihlabathi
Iindlela ezili-6 zeeNqununu zeziTitshala ziyakwamkela abafundi babuyele esikolweni
Iingxenye zeGitarre yeAcoustic
I-5 Eyona Ninzi Yama Racist Ann Coulter Quotes malunga Nabamnyama, iiLatinos namaYuda
Funda ngeengxowa zewayini okanye ngeeNyembezi